SIDA LOO QUUDIYO BASASHA MADAXA: BACRIMINTA BACRIMINTA IYO MACDANTA - BOW
Sida loo bacrimiyo basasha, shuruucda guud ee nafaqada dhirta
Basasha waa mid ka mid ah beeraha ugu beerta ugu jecel. Wakhti kasta oo sanadka ah, waxay siin doontaa suxuunta dhadhanka tartiib tartiib tartiib ah, iyaga oo ku dhajiya fiitamiin iyo xubno raad. Laakiin si loo hubiyo in goosashada wanaagsan, xagaaga degganaha waa inuu ogaado sida loo quudiyo basasha.
Ma taqaanaa? Cuntada caadiga ah ee adduunka - sida basasha.
Bacriminta Basasha on bacriminta
Waxa la ogaaday in koritaanka laga bilaabo 1 hektar 300 oo bas oo basasha ah, khudradda ay ka soo baxdo ciidda:
75 kg oo ah potassium;
81 kg oo ah nitrogen;
48 kg oo lime ah;
39 kg ee fosfooriga ah.
Marka dalbashada Bacriminta macdanta dhaqanka u isticmaalo:
% 50-50% potassium;
Macluumaadkan waa in la tixgeliyaa marka la quudiyo basasha geedka.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato in fosfooraska la wadaago si siman inta lagu jiro xilliga koritaanka, nitrogen - inta badan xilli hore ee sii kordhaya, iyo potassium - ee labaad. Su'aasha ah sida loo bacrimiyo basasha waxaa lagu go'aamiyaa nooca bacriminta, xaaladaha ciidda, beerashada beeraha, iwm.
Waxaa la darsay in bacriminta iyo Bacriminta potashka si weyn u dardar ah Bisaylkiisa ee khudaarta, nalalka noqdaan cufan iyo ballaadhan, oo si fiican loo kaydiyaa. Isla mar ahaantaana, haddii digada cusub la mariyo isku mar la leh heerka dhan Bacriminta macdanta, tani waxay yarayn doontaa dhalidda dalagga. Waxtarka lagu garto basasha quudinta oo dhan madaxu waxay ku xiran tahay inta kulaylka iyo iftiinka.
Cunto maareynta basasha, inta jeer ee ay bacrimiso basasha madaxa
Dadka degaanka xagaaga waa in aysan ogaan waxa kaliya ee Bacriminta loo baahan yahay basasha, laakiin sidoo kale ha ku qaldamin waqtigii codsigooda. Tixgeli goorta iyo sida loo quudiyo basasha kadib beerashada:
marka ugu horeysa ee fiiro gaar ah la saaro samaynta cagaaraha cagaaran ee baaliga (bacriminta nitrogen);
marka labaad, xoogga la saaro waxoogaa yar oo ah samaynta boodhka (Bacriminta fosfatka fosfate);
markii saddexaad, dhammaan dareenka ayaa diiradda saaraya dhismaha iyo kobaca ugu weyn ee guluubka (Bacriminta macdanta leh ee fosfooraska u badan).
Marka aad marka hore quudiso waxaad u baahan tahay inaad doorato sida loo quudiyo basasha ka dib markii biqilka.
Khubarada waxay ku talinayaan laba toddobaad ka dib marka la beerto qudaar lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah 40 g oo ah superphosphate, 30 g oo ah cusbada, 20 g oo ah chloride potassium. Dareerkan waxaa lagu soo bandhigay ciidda hoosteeda hoosteeda.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xalka soo socda: 2 tbsp. l malqacadaha ee daroogada "Vegeta" iyo 1 tbsp. l HOL waxay ku shubtay baaldi biyo ah. Isku dar ayaa sidoo kale sariirta beerta. Hal baaldi oo ah xal nafaqo ayaa lagu qaataa 5 mitir oo laba jibbaaran. m carrada. Bacriminta ugu fiican ee bacriminta organic noqon doonaa xal of digada. Hal koob oo digada ah ayaa loo qaadaa 10 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Haddii ciidda ka yar basasha ay tahay mid bacrin ah, iyo baadad leeyihiin midab cagaaran dhalaalaya oo si dhakhso ah u koraan, ka dibna quudinta this laga saari karaa.
Marxaladda labaad, waxaa la go'aamiyaa sida loo quudiyo basasha si ay u weyn tahay.
Quudintaan waxaa la fuliyaa 30 maalmood ka dib markii laga beerto miraha iyo 15-16 maalmood ka dib markii codsiga koowaad ee Bacriminta. Wakhtigan, 60 garaam oo superphosphate ah, 30 garaam oo silium ah, iyo 30 garaam oo cusbada lagu daro 10 litir oo biyo ah. Iskuulkan waxaa lagu bedeli karaa xalka "Agricol-2". In baaldi biyo ah ku shub 1 koob oo ah walaxda. Dhinaca 2 digrii. mitir dhul ah 10 litir oo nafaqo ah ayaa ku filan. Wixii quudinta basasha guga ee madaxa iyo isticmaalka arrinta organic. Xulashada ugu wanaagsani waxay noqonaysaa cunto karooti ah. Tani, cawska waxaa la geeyaa saddex maalmood biyo iyo saxaafadda. Hal galaas oo dareere ah ayaa ku filan baaldi biyo ah.
Quudinta basasha guga waa la dhammeeyaa marka guluubku koro ilaa 4 cm dhexroor. 5 mitir oo laba jibbaaran. m carrada waa in lagu daraa 30 g of chloride potassium, 60 g of superphosphate kala diri baaldi biyo ah.
Xalkan waxaa lagu bedeli karaa "Effecton-O" iyo superphosphate. In 10 litir oo biyo ah ku dar 1 tbsp. l superphosphate iyo 2 tbsp. l walxaha Caanaha quudinta leh ee ash ayaa ku caanbaxaya dhaqanka leh walxaha dabiiciga ah ee lagama maarmaanka ah. Si arrintan loo sameeyo, 250 g oo ash ah ayaa lagu shubay biyo karkaraya (10 l) oo loo oggol yahay in lagu buufiyo 3-4 maalmood.
Waa muhiim! Marka codsiga bacriminta ku daboolaan in aanay ku dhicin caleenta khudradda.
Sida loo helo goosashada hodan ah ee basasha, dhar beeleed
Bannaanka badiyaa waxay la yaabaan haddii basasha u egyahay digada iyo bacriminta kale ee dabiiciga ah (compost, digaaga digaaga, iwm)?
Xayawaanka dabiiciga ah waxay hagaajiyaan qaab-dhismeedka carrada ee qaansada, iyaga oo kobciya nafaqooyinka. Natiijo ahaan, dhulku waa ka fiicnaaday oksijiin iyo hawo. Intaa waxaa dheer, hordhaca arrin bani'aadam ah waxay ka qaybqaadataa nuugista ka sii wanaagsan ee dhaqanka ee xeryahooda macdanta. Si kastaba ha noqotee, marka la sameeyo sida waafaqsan qorshaha kor ku xusan waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto in:
laguma talinayo in lagu dabaqo digada cusub, aan lahayn undermuted, sababtoo ah taasi waxay kicin kartaa cudurrada basasha oo waxay hoos u dhigtaa dhismaha madaxa;
oo ay weheliso arrimo wax ku ool ah oo organic, miraha duurjoogta ah ayaa geli kara beerta, taas oo ay tahay in la gooyo mar dambe;
Marka aad dalbanayso xaddi badan oo bacriminta dabiiciga ah, dhammaan ciidammada geedka waxaa lagu hagaajin doonaa koritaanka cagaar badan, sidaas darteed nalalka ayaan ku dhicin.
Qawaaniinta bacriminta basasha leh maadooyinka macdanta
Marka la isticmaalo Bacriminta macdanta ee quudinta basasha waa in la xusuusto:
waxaa si adag loo mamnuucayaa in lagu milo Bacriminta dareeraha ee suxuunta loo isticmaalo bani'aadamka ama isticmaalka xayawaanka ee cuntada;
Ha kordhin qiyaasta ugu badan ee ay soo jeediso soo saaraha;
haddii ay ka kooban tahay macdanta on on baadad cagaaran ee basasha, waa in lagu dhaqaa biyo ka tuubo;
ka hor inta aan la samayn dareeraha leh ka kooban macdan, waa suurad wacan in wax yar ka qoyan ciidda ka yar dhirta;
haddii mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan (fosfooraska, nitrogen, potassium) ay ka maqan yihiin, Bacriminta waa in la codsadaa iyada oo ay la socoto, haddii kale qaybaha kale ma shaqeyn doono;
xayawaanka carrada leh, xaddiga dhaymada waa in la kordhiyaa, laakiin waa in la yareeyo xaddiga xalka. Haddii dhoobo ay ku adkaato dhulka, waxaa lagula talinayaa in waxoogaa kor loo qaado qiyaasta;
iyadoo la marinayo codsiga macdanta iyo Bacriminta dabiiciga ah, qaddarka ugu horreeya waa in la yareeyo 1/3.
Ma taqaanaa? Marka perekormke Bacriminta macdanta ee nalalka dhirta, Nitrates ururin kartaa.
Sida loo quudiyo basasha Bacriminta isku dhafan
Bacriminta basasha waxay ku jiri karaan walxaha macdanta iyo kuwa organic-ka ah beerashada. Xaaladdan, quudinta waxaa loo fuliyaa sida soo socota:
marka hore waa in lagu daro biyo (10 litir) oo lagu daro Hure (1 tbsp.) iyo slurry (250 ml);
labaad ayaa isku diyaarinaya isku dar ah 2 tbsp. l nitrophosphate iyo 10 litir oo biyo ah;
midka saddexaad wuxuu ku darayaa xal aqueous ah ciidda: ku dar 1 g oo ah cusbo potassium si 1 baaldi iyo 20 g of superphosphate.
Qaababka quudinta basasha
Ka hor inta aanad qufacin madaxa, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xaaladaha cimilada iyo waqtiga maalintii. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqoneysaa dhar xidhasho cimilada daruuraha ah iyo hawada aan lahayn, fiidkii. Laakiin haddii roobab, Bacriminta macdanta ee foomka qalalan yihiin kala firdhiyey fogaan ah 8-10 cm ka soo safka basasha, u dhow ilaa qoto dheer ah 5-10 cm.
Ka hor inta bilowga xilli ciyaareedka, ninkii beerta ka shaqeeyaa waa inuu ka fekero sida loo bacrimiyo basasha. Goosashada fiicani waxay awood u yeelan doontaa inay ku siiso quudinta qudaarta leh diyaar garow diyaar ah iyo daaweynta dadka.